Nosamborina tany Arabia Saodita ilay mpanoratra Yemenita Marwan Almuraisy ary tsy hita popoka avy eo · Global Voices teny Malagasy
Nosamborina tany Arabia Saodita ilay mpanoratra Yemenita Marwan Almuraisy ary tsy hita popoka avy eo
Voadika ny 27 Oktobra 2018 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, 繁體中文, Español, Français, русский, Português, عربي, English
Marwan Almuraisy. Saripikan'ilay mpanao gazety ao amin'ny Goodreads.
Maherin'ny efa-bolana taorian'ny nisamborana azy, mbola tsy fantatra ny toerana misy ilay mpanoratra Yemenita Marwan Almuraisy. Tany Riyadh, Arabia Saodita, toeram-ponenany no nahitana azy farany .
Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana i Almiraisy tamin'ny 1 Jona. Nilaza ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona fa nafindra tany amin'ny toerana tsy fantatra izy ary notazonina tsy afaka mifanerasera amin'iza na iza:
Tsy navela hahalala vaovao momba ny fiampangana azy, ny toerana izay nitazonana azy ary tsy afaka mitsidika azy ny fianakavian'i Al-Muraisy.
Tsy fantatra mazava ny antony nisamborana azy. Tao amin'ny kaontiny Twitter manokana , izay hananany mpanjohy efa ho iray hetsy, dia nisioka matetika momba ny vaovao mikasika ny teknolojia, ny fanavaozana ary ny siansa izy. Nandefa sioka fanentanana ihany koa izy sy horonantsary mba hanomezana aingam-panahy ny hafa.
Nanao tatitra tao amin'ny tranonkala Saodiana tsy miankina Sabq sy ny vavahadim-baovao hafa i Al-Muraisy , anisan'izany ny Tambajotra Siansa sy Fampandrosoana (Scidev.net) tsy mitady tombontsoa izay mifantoka amin'ny siansa sy ny teknolojia.
Araka ny voalazan'ny mombamomba azy ao amin'ny Goodreads, mitantana kaonty Twitter maromaro i Al-Muraisy , anisan'izany ny @WorldInNumbers, izay manome angondrakitra manerantany sy antontan'isa ho an'ireo olona miteny Arabo, ny @ArabicShortFilm izay natokana ho an'ny horonantsary fohy amin'ny teny Arabo, ary ny @3bqr, izay nandefasany fisaintsainana lalina na dia tsy navitrika aza ireo kaonty ireo hatramin'ny taona 2015. Mpiara-manorina tao amin'ny CV Graphic, orinasan'ny teknolojia izay mamorona ny CV ho an'ny matihanina amin'ny endrika infografika ihany koa izy. Tamin'ny volana Janoary 2014, namoaka boky, Lbn ala'sfour (Rononon'ny vorona), i Almiraisy, izay namoahany indray ny sioka mahatsikaiky miisa 140 nalefan'ireo mpisera miteny arabo.
Nanahiran-tsaina ny mpanohana azy ny fanjavonan'i Almuraisy, indrindra fa noho izy tsy nandray anjara miharihary tamin'ny hetsika ara-politika na ny fikatrohana momba ny zon'olombelona, ​​izay matetika ataon'ny manampahefana Saodiana lasibatra.
Mpanao gazety Yemenita monina ao Arabia Saodita ilay tovolahy Marwan Almuraisy. Volana maro lasa izay, nisambotra azy ny governemanta Saodiana ary nampanjavona azy na dia tsy manana fifandraisana amin'ny politika aza izy. Tsy mbola misy mahalala na inona na inona momba azy
Nanjavona tao an-tranony telo volana lasa izay ilay tanora mpanao gazety mpamorona zava-baovao Marwan Almuraisy izay manana mpanjohy efa ho 100.000 ao amin'ny Twitter! Iza no mahazo tombontsoa avy amin'ny fisamborana sy ny fampanginana ny mpisera Twitter tahaka an'i Marwan? Manohana ny fampandrosoana ny Helodrano sy ny tanora Arabo ny siokany rehetra ary kolontsaina sy fialamboly tsy misy ifandraisany amin'ny politika ny votoaty nomerika!
Toa tsy ny olana mifandraika amin'ny politika sy zon'olombelona ihany no lasibatra eo ambany fitondran'ny Printsy Mohammed Bin Salman amin'izao fotoana izao. Toa miseho ihany koa ny fehezan-dalàna mandripaka ny feo “mahaleotena” – ny tenin'ny olona rehetra izay tsy manoratra ny fanompoana ny governemanta na ny fandaharana ara-politika ao amin'ny fanjakana. Tonga teo amin'ny fahefana tamin'ny volana Jolay 2017 i Bin Salman, fa saingy amin'izao fotoana izao izy vao miatrika fiampangàna ho nandray anjara tamin'ny famonoana ilay mpanao gazety Jamal Khashoggi, ary manery azy momba io olana io ny filoham-panjakana sy ireo mpitondra manerantany.
Tao amin'ny fanadihadiana momba ny famoretana ny fampitam-baovao ao amin'ny fanjakana, izay navoaka talohan'ny fanjavonan'i Khashoggi, nanoratra ny Komity Miaro ny Mpanao Gazety Justin Shilad:
Hatramin'ny naha-printsy azy tamin'ny volana Jolay 2017, nitarika famoretana goavana manoloana ny mpanohitra teo ambany fitarihana ady amin'ny kolikoly sy ny ekstremisma i Salman. Nanjary fomba nahomby tamin'ny fandripahana ny feo mahaleotena ny fandaharan'i Salman tamin'ny fanavaozana na dia mampiroborobo ny filàna ny fanavaozana sy ny fanokafana an'i Arabia Saodita aza izy.
Nanadihady ny mety ho fanagadrana ny mpanao gazety farafahakeliny miisa 10 hafa hatramin'ny nahazoan'i Salman fahefana ny CPJ. Ireo izay nosamborina teo ambany fitondrany ny fanjakana dia ahitana ireo mpikatroka manandratra ny zon'ny vehivavy izay niady hahazo hitondra fiara, ny fanavaozana ara-politika izay notohanany sy notarihin'ny printsy izy tenany .